[အခန်းဆက်] တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ ဖက်တီးနင်ဂျာလို့ခေါ်ပါတယ်။ | yathar Magazine
[အခန်းဆက်] တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ ဖက်တီးနင်ဂျာလို့ခေါ်ပါတယ်။
နိုဝငျဘာ 2, 2019
ကျေးဇူးပါ……..!yathar Magazine စာဖတ်မိတ်ဆွေများအားလုံး! တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်!
ကျွန်တော်ကတော့ ဖက်တီးနင်ဂျာ လို့ခေါ်ပါတယ်။
ယခုလကစပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်ကာအနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေပြုနေသော <TOKYO ODEN BOYS>မှyathar Magazine တွင်အခန်းဆက်အနေနှင့်ပါဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်! လာမည့်အပတ်မှစပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်ကာအနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်နေသောဟာသလူရွှင်တော်များမှအမျိုးမျိုးသောပုံစံများဖြင့်ရေးသားသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးကြပါ!
“ဖက်တီး”လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘယ်လောက်ထိဝယ်လဲဆိုတာသိချင်နေတဲ့သူတွေတောင်ကြီး လောက်ရှိနေမယ်ထင်လို့ အရင်ဆုံး အရပ်အမြင့်နဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ပြောပြပါမယ်ဗျာ။
၁၆၁ cm (မြန်မာနိုင်ငံကအရပ်အမြင့်က?)
ပုံဆိုးမယ့်ဖက်တီးပဲနော် ~ !
အမှန်တကယ် ဖက်တီးဆိုတာဟုတ်ပေမယ့် နာမည်လောက်ပုံဆိုးတဲ့ဖက်တီးတော့မဟုတ်ဘူးနော့?
အဲ့ဒီအတောအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမျိုးမျိုးသောလှုံ့ဆော်မှုအတွေ့အကြုံများကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဟတ်ချလောင်ဆိုသလို! ၇၅ကီလိုဂရမ်အထိ! ၂၅ကီလိုဂရမ်တောင်ပိန်သွားပြီးကျန်းမာရေးနဲ့ညီအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်!
ဒါပေမယ့် နောက်ထပ်နောက်ထပ် ပိုပိုပြီးဝိတ်ချချင်! ပါသေးတယ်။
ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှစာဖတ်ပရိသတ်များထဲမှာ အခုတလောဝလာတယ်လို့ထင်နေသူများ !
ဘာကြောင့်အဲ့လိုထင်လဲမသိပေမယ့်၊ ကျွန်တော်ဖက်တီးနင်ဂျာ၊ မြန်မာနိုင်ငံရောက်ပြီးသိခဲ့တာရှိတယ်။
မြန်မာလူမျိုးများက ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်ပိန်ပိန်ပါးပါးခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင်သူများပေမယ့် အသက်ကြီးလာတာနှင့်အမျှ ဘာကြောင့်တဖြေးဖြေးဝလာကြတာလဲ၊ ရုတ်တရက်ဆိုသလိုဆူမိုနပန်းသမားလုပ်တော့မလား? ထင်ရလောက်အောင် ခန္ဓာကိုယ်အကြီးကြီးဖြစ်လာသူများတယ်လို့ တွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်ဗျ။
အဲ့လူတွေထဲမှာ တကယ်ပဲ ဆူမိုနပန်းသမားလုပ်မယ့်သူများရှိနေလားဗျ၊ ဒါမှမဟုတ် အများစုကသတိမထားလိုက်မိတဲ့အချိန်အတွင်းမှာ ၀လာကြတာလား?
အမှန်ပဲ ဆီများများနဲ့ချက်တဲ့ဟင်းလျာတွေကအရသာရှိတယ်ဆိုတာ ! ကျွန်တော်ဖက်တီးနင်ဂျာလဲအရမ်းကြိုက်။
အဲ့ဒီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အရသာရှိအောင်လုပ်ပေးတဲ့ ဆီ !
ဆီဆိုတဲ့အရာက ပုံမှန်ထက်ကယ်လိုရီတွေအများကြီးပါတယ် !
ကယ်လိုရီဆိုတာ အစားအစာတွေကိုအာဟာရဖြစ်အောင်လောင်ကျွမ်းရာမှာလိုအပ်တဲ့စွမ်းအင်၊ အင်ဂျင်ဘယ်နှစ်ကြိမ်မောင်းနှင်ရင်ဆီဘယ်လောက်ကုန်မလဲဆိုတာကိုတွက်ချက်ထားတာကယ်လိုရီပါ။
အဲ့ဒါနဲ့ပဲ မြန်မာဆူမိုနပန်းသမားအဖွဲ့ကြီးက ပိုမိုအင်အားကြီးလာပါတော့တယ်။
“နားညည်းတယ်ကွာ! ၀တာဘာဖြစ်လဲ~ ဘာတွေဆိုးရွားနေလို့တုန်း ! သူငယ်ချင်းမင်းကဘာပြောချင်လို့လဲ!”
အမှန်ပဲ ကျွန်တော်လဲကလေးဘ၀ထဲက၀လာတာ အခုထိလဲဝနေတုန်းပဲ။
ဒါကြောင့် ဒီစာကိုဖတ်မိတဲ့မိတ်ဆွေများကိုယ့်ခန္ဓာကိုစိတ်အလိုမကျသူများရှိနေမယ်ဆိုရင်! အတူတူကြိုးစားကြည့်ကြရအောင်လား!
ဒါဆိုရင်ပထမဆုံးမိမိစားနေတဲ့အစားအသောက်ထဲမှာဆီဘယ်လောက်ပါနေလဲဆိုတာအရင်သတိထား ကြည့်ရအောင်! ရုတ်တရက် ပြေးခြင်း၊ အစားရှောင်ခြင်းကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး! တဖြည်းဖြည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကစတင်ပြောင်းလဲယူရပါမယ်!
ပိန်ချင်တယ်! ပိန်ရမယ်! လို့စိတ်ခံစားချက်က ပိန်လွယ်စေပြီး ခန္ဓာကိုယ်ပိန်လာစေပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ! ဖက်တီးနင်ဂျာပါ! မြန်မာပြည်ကိုရောက်ရှိလာပြီး ၂၅ kg ၀ိတ်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Myanmar Diet Coordinator အဖြစ်မိတ်ဆွေအားလုံးကို အမျိုးမျိုးသောဝိတ်ချရန်နည်းလမ်းများကိုပြောပြ ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုတလော ဗိုက်ပူနေလို့စိတ်ညစ်နေသော မိတ်ဆွေများ! ကျွန်တော်နှင့်အတူတူကြိုးစားကြရအောင်။
ကမ္ဘာ့စံချိန် တင် ငစားကြီး (၁၀) ယောက်
သိမှတ်ဖွယ် နိုင်ငံတကာစကားပုံ များ Part 1